Commercial Air oyi
Portable Air oyi
Infrared Ụtọ okpomọkụ
ụlọ ahịa Cooling
Ebe a na-eme Igwe isi
Unattended isi ojii kwesịrị nwere ọgụgụ isi jụrụ usoro;
Nza nke ígwè ọrụ na-arụ ọrụ 24/7 na-aga n'ihu kpo oku;
Ọ nwere ike ime nyochaa ma na-achịkwa na-arụ ọrụ ọnọdụ nke ígwè ọrụ na-ekesa dị iche iche isi ụgbọ;
The nkenke ikuku conditioners 'ike oriri bụ nnukwu; ọ chọrọ etozu maka ime ihe na mmezi.
Akọrọ ikuku ga-eme ka static isure okwu ngwá, ọ na-achọ mgbe nile okpomọkụ ma na iru mmiri.
JH isi ojii ikuku Coolers na-pụrụ iche maka China unicom, China Mobile, China Telecom na China Post.
The China Union arụnyere JH isi ojii ikuku oyi maka esịtidem jụrụ, ọ na-eji JH ikuku oyi iyuzucha ọrụ na-eme ka ikuku na-etolite elu mgbasa, na mgbe okpomọkụ N'ịbụ n'ime igwe atara n'èzí.
Anyị wụnye linkage ọku damper maka ikuku inlets na outlets izere ọkụ na-agbasa, na-enye ndị inlets na outlets na atọ mgbochi ụgbụ iji gbochie anwụnta, ụmụ ahụhụ, na ájá mbuso agha;
Iji ulo oru-ọkwa okpomọkụ ma na iru mmiri mmetụta na-anakọta na ime ụlọ na n'èzí okpomọkụ na ikwu iru mmiri, site na ọgụgụ isi algọridim nachi ofufe ọsọ na linkage oge iji hụ na ụlọ na mgbe nile okpomọkụ ma na iru mmiri.
N'okpuru na-arụ ọrụ nwere ọgụgụ isi okpomọkụ ma na iru mmiri akara, na ime ụlọ okpomọkụ ma na iru mmiri na-mgbe na-achịkwa n'ime ọnọdụ nso, ọ dịghị ihe static mberede-erukwa na circuit osisi.
The gara aga ntụ oyi na-adịghị wepụrụ, n'ihi na na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ ma ọ bụrụ na ikuku oyi ike izute obi jụrụ chọrọ, JH ikuku Coolers 'nwere ọgụgụ isi akara ga-akpaghị aka-atụgharị na aga ntụ oyi ajụkwa nke ụlọ, na abụọ na ụdị obi jụrụ usoro pụrụ ọrụ ọnụ .
Kemgbe afọ, na ojiji nke evaporative ikuku Coolers akụkọ ihe dị 70% nke oge, na elu okpomọkụ na udu mmiri ọnọdụ ọ na-eji ẹdude nkenke ntụ oyi na ọ bụ banyere 30% oge maka ojiji, si otú na-enwe kwa afọ na anyị nwere ike ịzọpụta 56% na ọkụ eletrik na-eri.
Okwu: Wushan Road No.3, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, China